De Gea oo shaaca ka qaaday horyaalka uu u arko inuu yahay kan ugu fiican adduunka – Gool FM
De Gea oo shaaca ka qaaday horyaalka uu u arko inuu yahay kan ugu fiican adduunka
(Manchester) 27 Sebt 2019. Goolhayaha kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Spain ee David de Gea ayaa shaaca ka qaaday horyaalka uu u arko inuu yahay kan ugu fiican adduunka.
David de Gea ayaa si cad u sheegay in horyaalka uu ka xamaasho ee Premier League-ga uu yahay kan ugu fiican adduunka.
Shabaq ilaaliyaha reer Spain ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “DAZN” wuxuu ku sheegay:
“Way adag tahay in erayo lagu sharaxo waxa ay la micno tahay in lagu guuleysto Premier League”.
“Premier League waa horyaalka ugu tartanka adag marka loo fiiriyo horyaalada kale ee adduunka, waxaana u dhexeeya farqi aad u weyn, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in lagu guuleysto Premier League”.
Intaas kaddib wuxuu ka hadlay goolhaayaha reer Spain xaalada macalinkiisa wuxuuna yiri:
“Waa wiilka kooxda, wuxuu halkan joogay isagoo ciyaaryahan ah dhowr sano, si fiican ayuu u garanayaa kooxda”.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in qof walba ee kooxda ku sugan uu isaga la jiro ilaa iyo heer dhimasho ah, taasina waa wax loo baahan yahay, waa macalin fiican, anagana isaga ayaan la jirnaa ilaa iyo dhamaadka”.
Zidane oo war fiican ka helay tababarka Real Madrid, kahor kulanka adag ee Madrid Derby
Miyuu qeyb ka noqon doonaa Lionel Messi kulanka El Clásico, kaddib dhaawacii soo gaaray??